Tatoazy Volana - Tena fantatrao ve ny dikan'izy ireo? | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy amin'ny sandry
Tatoazy amin'ny tongotra
Tatoazy ao ambadika
Tatoazy misy endrika
Tattoos misy litera
Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Tatoazy zavatra sy zavatra
Tattoosin'ny toetra amam-panahy
Tatoazy volana, fantatrao ve ny dikan'izy ireo?
Susana godoy | | tombokavatsa
ny tatoazy volana Iray amin'ireo safidy ireo izay mahagaga antsika foana izy ireo. Amin'ny lafiny iray, marina fa tsy zava-baovao izy ireo satria hitantsika tamin'ny saika rehetra azon'izy ireo. Fa amin'ny lafiny iray, dia tsy maintsy lazaina fa manana heviny lalina kokoa noho izay azontsika eritreretina izy ireo.
Tsy maninona izay volavola nofidinao, satria amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia ho marina ianao. Avy amin'ny dingana volana na ireo izay ampiarahina amin'ny kintana na foko aza. isan-karazany izay manana zavatra betsaka holazaina amintsika. Tena te hahafantatra ny dikany lehibe misolo tena antsika ve ianao?
1 Dingana iray amin'ny volana amin'ny tatoazy tokana, inona no dikan'izany?
3 Ny ampahefatry ny volana
4 Ampahefa-potoana farany
5 Ny volana vaovao amin'ny tatoazy volana
Dingana iray amin'ny volana amin'ny tatoazy tokana, inona no dikan'izany?
Izy io dia iray amin'ireo endrika endrika malaza indrindra amin'ny tatoazy. ary tsy ho an'ny ambany. Izy io dia ny fananana endrika mitovy, amin'ny dingana rehetra amin'ny volana. Matetika dia sary tery izy io, amin'ny ranomainty mainty ary ahitantsika ny dingana rehetra amin'ny volana. Betsaka ny olona misafidy ny handravaka ny sandriny miaraka amin'izy ireo, fa koa amin'ny ampahany amin'ny vozona na ny lamosina dia lavorary izy ireo. Fa ankoatr'izay, raha mifantoka amin'ny dikany manokana isika dia tsy maintsy miresaka momba izany maneho ny tsingerin'ny fiainantsika. Satria ao amin'izy ireo koa dia ny fandehan'ny fotoana, ny fiainana amin'ny ankapobeny ary ny andro manokana. Mampiseho fahaterahana sy fahafenoana ary fahanterana isika. Noho izany, dia tatoazy afaka mitondra antsika tsirairay avy.
Volana boribory misy hazavana maro dia iray amin'ireo singa fototra izay tsy mety hanjavona amin'ny tatoazy volana. Satria midika dikany maro io. Tsy vao sambany no ahitantsika ny antony mahatonga azy io hiova amin'ny natiora sy olona na biby. Amin'ny tany nofinofy, io no fotoana tsara indrindra hiresahana momba ny werewolves sy ny zavaboary mitovy amin'izany. Fa raha miverina amin'ny tontolon'ny tombokavatsa isika, dia tsy maintsy lazaina fa ity volana ity no solontenan'ny feno. From fotoana feno amin'ny fiainantsika, misy tanjaka lehibe ary herin'ny karazana fanahy.
Ny ampahefatry ny volana
Araka ny tondroin'ny anarany dia io no fotoana hanombohan'ny volana miposaka sy hamony bebe kokoa noho ny hatramin'izay. Tokony holazaina fa fotoana fiovana eo amin'ny volana vaovao sy ny volana feno io. Ho fanampin'izany, manondro ny fahaterahana sy ny fitsanganana indray, ary koa ny fanantenana sy ny faniriana hitombo hatrany. Fomba avela any aoriana ny zavatra ratsy, hanohy handray dingana mandroso, hikaroka vahaolana. Raha nanana olana ianao, saingy nivoaka tamin'izy ireo na toe-javatra sarotra, dia fotoana mety izao hakana azy amin'ny ampahefatry ny volana.
Amin'ity tranga ity dia tsy manana endrika falifaly sy be fanantenana toy izany isika. Hatramin'ny eto dia hita amin'ny lafiny mangidy kokoa izy io, ary koa ratsy kely. Eny, mifanohitra tanteraka amin'izay noresahintsika teo izany. Be loatra ny fanantenana sy ny fahatsapana tsara. Saingy araka ny nambaranay tamin'ny voalohany, ny dingana amin'ny volana dia ampahany amin'ny fiainantsika ary ao anatin'izany no ahitantsika ireo fotoana tsy mahafinaritra indrindra ireo. Ka raha fintinina, maneho ny lafiny maizintsika, izay ananantsika rehetra.
Ny volana vaovao amin'ny tatoazy volana
Izy io dia iray amin'ireo dingana izay tsy azontsika avela ao amin'ny inkwell. Angamba tsy dia fahita firy ny mahita tatoazy natokana ho an'ity dingana ity fotsiny. Satria ireo voalaza etsy ambony ireo no lehibe indrindra, rehefa miresaka momba ny tombokavatsa isika. Fa na izany aza, tsy maintsy lazaina fa manondro ny fiandohana, na dia amin'ny fomba fijery iray mifanohitra kely amin'ny an'ny volana fenomanana aza, satria tsy mitovy ny famirapiratany aminy. Tokony holazaina ihany koa izany omena fiarovana izy na famoronana ary mazava ho azy, reny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Tatoazy volana, fantatrao ve ny dikan'izy ireo?
Tatoazy hafa mifandraika
Irezumi, niavian'ny tatoazy any Japon
Raiso ny hevitra tato ho ato amin'ny mailakao.